मोटोरोलाले मोटो Z, G Plus4र छ अन्यलाई Android Oreo मा अपडेट गर्दछ Androidsis
मोटोरोलाले मोटो जेड, जेड २ प्ले, जी प्लस and र अधिक Android ओरेओमा अपडेट गर्दछ
ईडर फेरेनो | | Motorola, एन्ड्रोइड संस्करणहरू
मोटोरोला यी हप्ता धेरै व्यस्त रहेको छ Android ओरेओ को लागी अद्यावधिक तयार उनीहरूको केहि फोनहरूको। २०१ 2018 मा आउने सुरूवात तयारीका अतिरिक्त। फर्मले अब आश्चर्यचकित गर्दछ एन्ड्रोइड ओरियोमा नयाँ नयाँ मोडेलहरू अपडेट गर्दै। यस तरिकाले, कम्पनीले अपडेटको सर्तमा राम्रो छवि पुन: प्राप्ति गर्न चाहन्छ।
यसको लागि, मोटो जेड, जेड २ प्ले, जी प्लस and र अन्य लगायतका धेरै उपकरणहरूले एन्ड्रोइड ओरियोमा अपडेट गर्न सुरू गरिरहेछन्।। त्यसोभए यी फोनहरू मध्ये एकसँग प्रयोगकर्ताहरूले चाँडै नै अपरेटिंग प्रणालीको नयाँ संस्करणको आनन्द लिने छन्।
केहि दिन अघि मोटोरोलाले मोटो एक्स update अपडेट गर्न सुरु गर्‍यो। अब, यस समय पछि, फर्मले घोषणा गरेको छ कि अपडेट आठ थप मोडलहरूमा पुग्न शुरू भयो। त्यसोभए तिनीहरू निश्चित रूपमा आउने हप्ताहरूमा व्यस्त हुने छन्। एन्ड्रोइड ओरियोमा कुन मोडेल अपडेट हुन्छन्?
पहिले नै उल्लेख गरिएको मोटो एक्स addition को अतिरिक्त, अन्य मोटोरोला उपकरणहरू जुन एन्ड्रोइड Oreo मा अपग्रेड हुनेछ:
मोटो G5S प्लस
सूचीमा हामी सबै कुराको एक बिट पाउँछौं। २०१ 2016 र २०१ in मा त्यहाँ रिलीज भएका फोनहरू छन्। थप रूपमा, त्यहाँ उच्च-अन्त र मध्य-दायरा मोडेलहरू छन्। त्यसैले फर्मले यस अपडेटमा विविधताको लागि रोजेको छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, E श्रृंखला सूची बाहिर छोडियो.
यदि तपाईंसँग फोनहरू छन् जुन अपडेटमा रमाउन जाँदैछन्, तपाईं सक्नुहुन्छ सेटि toहरूमा जानुहोस् र म्यानुअल रूपमा अपडेटको लागि खोजी गर्नुहोस्। त्यहाँ पहिल्यै उपयोगकर्ताहरू छन् जसले यसलाई रमाउन सक्दछन्। यदि होईन भने केही दिनको कुरा हुनेछ।
Android Oreo मा अपडेटको साथसाथै उनीहरूले डिसेम्बर सुरक्षा प्याच पनि प्रस्तुत गरेका छन्। विभिन्न खतराहरूबाट प्रयोगकर्ताहरूलाई बचाउन।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » ट्यूटोरियलहरू » एन्ड्रोइड संस्करणहरू » मोटोरोलाले मोटो जेड, जेड २ प्ले, जी प्लस and र अधिक Android ओरेओमा अपडेट गर्दछ
G4 Play अपडेट गर्न केहि छैन? धेरै अनौंठो
एन्ड्रोइड ओरियो अन्ततः १% अपनाउने भन्दा बढि छ
Android P ले कल रेकर्ड गर्न एक नेटिभ प्रकार्य सामेल गर्दछ